अभिनेता अनमोल केसीलाइ बडीगार्डको आबस्यकता किन ? ( भिडियो )
भिडियो / सेलिब्रिटी
नेपालमा आफ्नै खर्चमा बडीगार्ड लिएर हिड्ने मान्छे बिरलै भेतिएला। सरकारी ओहदामा रहेका र शिर्ष नेताहरुले बडीगार्ड लिएर हिड्नु स्वाभाविक हो। उनीहरुलाई सरकारले नै उपलब्ध गराउने बडीगार्ड हरु लिएर हिँड्ने गरेको कुनै नौलो कुरा हैन । तर नेपाली फिल्म खेल्ने सेलिब्रिटी हरु बडीगार्ड लिएर हिड्ने अबस्थामा पुगिसकेका हुन् त ? धेरै त हैन केहि सेलिब्रेटीहरुले बडिगार्ड लिएर हिँड्न थालेको देखिन्छ ।
अनमोल केसी, प्रदिप खड्का जस्ता केहि नायक हरुले यस अघि बडीगार्ड लिएको हिडेको देखिएको थियो। यसको सुरुवात भने अभिनेता अनमोल केसीले गरेका मानिन्छ । तर अभिनेता प्रदीप खड्काले फिल्म ’लिलिबिली’ को घोषणा सभामा बडिगार्ड लिएर ईन्ट्री गरेका थिए जसको चर्को आलोचना भयो। त्यस पछि उनि बडीगार्ड संग देखिएका छैनन्। नेपाली अभिनेताहरुले पाउने पारिश्रमिकले बास्तबमै बडिगार्ड पालना सक्ने क्षमता बनेको हो कि असुरक्षा भएर हो त त्यो त सेलिब्रिटीलाइ थाह होला।
दर्शक बीच हुलमुलमा बडीगार्ड लिएर हिड्नु ठिकै होला तर पत्रकार सम्मेलन र सिने अवार्ड जस्ता ठाउमा बडीगार्ड लिएर पुग्नु भनेको छ शो अफ बाहेक अरु केहि होला र ? चलचित्र हलमा जादा घुइचोमा दर्शकको ताना तान बीच पर्ने सेलिब्रिटी पत्रकार सम्मेलनमा समेत बडीगार्ड लिएर पुग्दा आलोचनामा पर्न थालेका छन्। पत्रकार सम्मेलन मा यी सेलिब्रिटी लाइ को संग डर हुन्छ यस्ता प्रश्न पत्रकार हरु बीच उठ्ने गरेको छ। यस्तै यस्तै कारणले अनमोलको आलोचन हुन थालेको छ । थप रिर्पोट भिडियोमा हेर्नुहोस……
प्रहरीको गाडीबाट घाइते रोश्नाको उपचार जिम्मा कस्को ? प्रहरिले पुरै उपचार खर्च बेहोर्न किन नपर्ने ?
सागरको देखियो यस्तो क्रेज, युबतिहरु बेहोशी पछिमा उफ्री उफि नाचे
खुसि हुदै रविले सुनाए सप्तरीको तिलाठी बस्ति हस्तान्तरंणको योजना ( भिडियो सहित )
Previous Article मोटरसाइकल दुर्घटनामा ट्राफिक प्रहरीको मृत्यु
Next Article ‘दही चिउरा असार पन्ध्रमा ‘ अनुप विक्रम र बर्षाको गीतको भिडियो